Chii chinonzi Coder? Vatengi vazhinji vakabvunza uyu mubvunzo mushure mekugamuchira iyo kotesheni yechinamato yekunyorera muchina. Iyo coder ipurestwa yakapusa pane zvinyorwa. Ichi chinyorwa chinokuzivisa iwe kune akati wandei akakurisa purinda pane yekugadzira mutsara. 1, Coder / Coding Machine Iyo yakapusa macoding muchina ndeye co ...
Aseptic kutonhora kuzadza uye kupisa kuzadza
Chii chinonzi aseptic kutonhora kuzadza? Kuenzanisa neyechinyakare inopisa yekuzadza? 1, Tsanangudzo yeaseptic yekuzadza Aseptic inotonhora kuzadza inoreva iyo inotonhora (yakajairwa tembiricha) kuzadza kwezvinwiwa zvigadzirwa pasi peaseptic mamiriro, inoenderana neyakanyanya-tembiricha inopisa yekuzadza nzira inowanzo shandiswa un ...
Kushanya kweMutengi kweCongo Kwekuzadza Mashini.
Munguva yeiyo 2nd China International Expo Expo munaNovember, 2019 vamiriri veAfrica vanosvika kuShanghai vachibva kuCongo, South Africa. Varidzi vakashanyira uye vakatarisa michina yavanoda, fekitori yedu ndiyo kiyi yekuzadza muchina wekupa muchirongwa chavo. Isu, Higee Machinery, inogadzira yakavakirwa suppli ...
ne admin pane 19-12-17
Zvichienderana nenyaya yemarara anopatsanura, mutengo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, bhodhoro rePLA ndiro rakanyanya muindasitiri yezvinwiwa here? Kubva munaChikunguru 1, 2019, Shanghai, China yakagadzirisa marara akanyanyisa kupatsanura. Pakutanga, paive nemumwe munhu parutivi pemarara anogona kubatsira uye g ...
ne admin pane 19-12-15
Nezve iyo indasitiri muchina unotenga kubva Kunze vatengi, ndezvipi zvinhu zviri akakosha mapoinzi ekutengeserana? Iye zvino tinoda kukurukura iyi nyaya kubva kune imwe nyaya yatakasangana nayo nguva pfupi yadarika. Background: Cali anobva kune mumwe mugadziri muLos Angeles, USA, iyo kambani inoda ...
ne admin pane 19-12-14
2017 China Zvigadzirwa Zvemidziyo & Zvekushandisa Exhibition
ne admin pane 19-12-13
Kuvaka Expo 2017 muSri Lanka
ne admin pane 19-12-12
4th Malaysia International Expo 2016 muKLANG
ne admin pane 19-12-11
2015 Exhibition muDubai
ne admin pane 19-12-10